I-Semalt Expert: Indlela yokujongana neengxaki ezi-6 zokuzibandakanya kwi-Analytics
Ukulinganisela izicwangciso zokuthengisa iziqulatho ngokuchanekileyo imilinganiselo ibalulekile. Ngaphezu koko, kufuneka uhlalutye indlela ukubandakanya umxholo wakho. Uhlalutyo lokubandakanya luyinkimbinkimbi kodwa enye yeendlela eziphambili zokuthengisa.
Ngokweengcali ezivela kwi Semalt , u-Ivan Konovalov, abathengi abaninzi kunye nabaninzi abathengisi babela isabelomali kwizicwangciso zokuthengisa ngokuqhubekayo kwaye bafuna ukubona iziphumo ezilungileyo.
Enye yeengongoma ezibuthakathaka zophulo-mveliso zophuculo kukuchithwa kwedatha - vape tank atomizer coil. Xa abathengisi bebancipha okanye bakhawuleza kwingxelo ye-analytics, banokujamelana neengxaki njengoko kuchaphazela izicwangciso zabo ezizayo ngokubanzi.
Ingxaki # 1: I-traffic eninzi kakhulu yokubuya
Ukuba ubona ukuba kukho ukuhamba kweendlela ezininzi kwaye akukho zithuthi ezitsha, kufuneka uguqule izicwangciso zakho zokuthengisa. Abathengisi abahlukahlukeneyo balwela ukufumana ukulinganisela phakathi kokubuya kunye neendlela ezintsha zewebhu, kodwa kufuneka ufumane ixabiso leempawu ezizodwa njengoko ukukhula kwesiza sakho kuya kuxhomekeka kwezo mbono. Iinjongo zesayithi lakho kufuneka zinikezelwe ngokufunda, ubunkokheli obukhulu kunye nokuzonwabisa. Ngaphezu koko, kufuneka uzame ukufumana uninzi lwezithuthi njengoko kunokwenzeka, ngaphandle kokunciphisa umgangatho. Zama ukuguqula iindwendwe kubahlali abonwabileyo.
Ingxaki # 2: I-spammers kunye ne-bots zingasenza i-traffic yakho
Kufuneka ukhangele i-traffic transfers rhoqo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho iibhokhwe ezimbi kunye ne-bots ezilungileyo. Iibhokhwe ezimbi ziza kuhlaziya idatha yakho yokuhlaziya. Kukho amathuba okuba i-spam spam izakuchaphazela i-akhawunti yakho ye-Google Analytics kwaye kufuneka udale izihlungi ukuze uzilahle. Ugaxekile lwe-Ghost alufikeli iwebsite yakho..Esikhundleni salokho, ithumela imibono yokukhohlisa, kwaye isantya sokuhlawula i-100%. Enye yeefayile eziqhelekileyo zivimbela i-spam spam kwiifayile .htaccess. Iifayile ziya kuqinisekisa ukuba umoya ogaxekile awuyi kutshintshi iwebhusayithi yakho.
Ingxaki # 3: Iipops ezingachazwanga kumanani akho
Ngaba ubona ezinye idipsi ezingachazwanga kumanani akho? Ngaphambi kokuba ukhathazeke ngale meko, kufuneka uthathe amanyathelo kwaye ukhangele ingxelo yeGoogle Analytics yedatha echanekileyo. Ezinye zeempawu kunye nokutyelelwa kwewebhusayithi yakho kungenzeka ukuba buxoki. Ukuze ufumane ingcamango yendlela amanani akho aguqukayo ngayo, kufuneka uhlolisise idatha yexesha elide kunye nokuchonga ukuba isayithi ingekho kumgangatho ongathandekiyo okanye ontle. Qinisekisa ukuba izicwangciso zakho zokuthengisa ziye zafika kumakishi, kwaye akukho nxaxheba ku-spam echaphazelekayo kuyo.
Ingxaki # 4: Izinga lokuphakama eliphezulu
Izinga eliphezulu lokunciphisa enye yezona ngxaki ezinkulu zeentengiso kunye neewebhumasters zinamhlanje. Akunakulungele nayiphi na iwebhusayithi, kodwa kuxhomekeke ekubeni kutheni indawo yakho idibeneyo, isantya sobunzima asinakulimaza kakhulu. Qinisekisa ukuba usebenzise amacebo okuthengisa okude, apho abathengi bathetha yonke into kuwe. Kufuneka usebenzise iindlela zokunciphisa izinga lakho lokuhlawula. Ukuba iindwendwe zakho zibetha amaphepha athile ngaphezu kwamanye, unokushiya loo maphepha kwaye uguqule izicwangciso zezinye. Iziphumo eziphezulu zokuhlawula iziphumo ezivela kwiingxaki ze-UX kwiwebhusayithi yakho.
Ingxaki # 5: Amaphepha kwiseshoni aphantsi kunokuba alindelwe
Umgangatho wezothutho kwisiza sakho unokwandisa umvuzo wakho ngaphandle kwexesha. Kodwa ukuba iphepha lakho kwiseshoni liphantsi kunalindelekileyo, kufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza. Kukho amathuba okuguqulwa kwakho kuya kuthinteka. Umgangatho ophezulu wamaphepha ngokutyelela kubonisa indlela ukubandakanya amaphepha akho kunye nendlela abaphulaphuli bakho baqhuba ngayo umxholo wakho. Isisombululo kuphela kule ngxaki sitshintsha umxholo kunye nohlobo olubanzi lwewebhusayithi yakho. Kufanele usebenzise izakhiwo ezifanelekileyo, iipramramidal ze-SEO kuphela.
Ingxaki # 6: Abavakatye bachithe ixesha elaneleyo kwiwebhusayithi yakho
Ukuba ukhathazekile kukuba iindwendwe azichithelanga ixesha elide kwiwebhusayithi yakho, oku kungabonakalisa ukuba ngabafundi bakho abafumani nantoni na echaphazelayo. Eli lixesha apho kufuneka ubhekisele abaphulaphuli bakho kwisayithi yakho ngokunikela izaphulelo ezizodwa kwiintengiso. Ngaphezulu, umxholo wewebhusayithi yakho kufuneka ube nenxaxheba kwaye uncedo. Nceda iintlobo ezahlukeneyo zeendaba kwaye ulayishe amavidiyo, imifanekiso, kunye namaphepha ekhwalithi kwiwebhusayithi yakho ukubhena inani elikhulu labantu.